उपकरण को कुनै पनि खरिद कहिल्यै खण्डन। विफलता भित्र देखा परेको छ भने वारंटी अवधि, हामी आशावाद संग स्थिति को देखो हुनेछ - विक्रेता हामीलाई विरुद्ध छ, किनभने ग्राहकहरु केही वारंटी छन्। छ, हामी क्षति भुक्तानी पैसा फिर्ता गर्न, मा खराब, मुक्त हटाउन वा बाध्य छन्। र हामी संग सशस्त्र छन् वारेन्टी कार्ड र खरिद माल को लागि एक चेक, न्याय खोज्न पसलमा हतार।
तर सबै त सरल छैन। यसलाई अब हरेक पालो मा उद्धृत गर्न फैशन छ भन्ने हाम्रो उपभोक्ता अधिकारको सुरक्षा व्यवस्था अनुसार, हामी मुक्त मरम्मत, उत्पादन ग्यारेन्टी वा फिर्ती को प्रतिस्थापन आवश्यक हुन सक्छ। एउटै समयमा मरम्मत (अर्थात्, हामीलाई यो आयातित गर्न), विक्रेता व्यवस्था द्वारा गर्न सक्छन् जिद्दी। तर व्यवहार मा, सबै भन्दा अवस्थामा हामी तपाईंलाई एउटा सेवा केन्द्र पठाउने। हामी निःशुल्क मर्मत लागि आशा त्यहाँ जाने, तर बिस्तारै यो असम्भाव्य छ हासिल गर्न भनेर स्पष्ट हुन्छ। वारेन्टी कुनै जल्दी प्रदर्शन। संस्था को "विशेषज्ञ" हाम्रो खर्च हाम्रो घटना र प्रस्ताव ग्यारेन्टी मरम्मत पहिचान गर्न केहि हुनेछ।
यो किन छ? तथ्यलाई यसको आफ्नै सेवा हरेक प्रमुख उपकरण स्टोरमा उपलब्ध कार्यशालाओं बाहेक, त्यहाँ तथाकथित अधिकृत सेवा केन्द्र छन् भन्ने छ। निर्माता र उपकरण आपूर्तिकर्ता, नियम आफ्नै सेवाहरू (मामला troublesome र कम लाभ छ) खोल्न र यो सेवा आधिकारिक यो ब्रान्ड को उत्पादनहरु मर्मत गरिने विद्यमान कार्यशालाओं संग अनुबंध निष्कर्षमा पुग्न कुनै हतारमा छन्। यो सेवा अधिकृत भनिन्छ। आफ्नै खर्च मा सेवा को निर्माता वा आपूर्तिकर्ता संग सम्झौता अन्तर्गत ग्यारेन्टी उत्पादनहरु मर्मत गर्न पर्छ। एउटै सेवा समय समयमा स्पेयर पार्ट्स र उचित मर्मत कार्य को अधिग्रहण को लागत लागि compensates।
तर निर्माता व्यवहार मा धेरै कस छ हामीलाई तपाईं मर्मत गर्न को लागि यो निःशुल्क को वैधता नियन्त्रण गर्दछ। र सबै मरम्मत लागत बेतलबी सेवा रहने - यो कम्पनी को प्रतिनिधि मामला एक ग्यारेन्टी छैन भनेर प्रमाणित हुनुपर्छ। तथ्याङ्क अनुसार, सबै मरम्मत को5देखि 10% ग्यारेन्टी पहिचान छैन। तसर्थ, पैसा सम्भावित हानि बचाव गर्न, यस्तो सेवा आफ्नो सर्वश्रेष्ठ हामीलाई द्वारा किनेको माल को सम्बन्ध मा विक्रेता को ग्यारेन्टी दायित्व nullify गर्न गरिरहेका छन्। अक्सर, यो लागि हामी क्षति कारण लापरवाह ह्यान्डलिङ वा जानिजानि क्षति फलस्वरूप हाम्रो दोष गर्न भयो भनेर प्रमाणित गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ। शरीर (अधिक गम्भीर कमजोरीहरू कुरा छैन) मा कुनै पनि स्क्राच सबै वारंटी बारेमा भूल एउटा कारण हुन सक्छ। सक्छ यहाँ हामी इन्कार वैध - र प्रविधी मर्मत गर्न प्रयास निशान साँच्चै छ भने, यो पूर्ण बेपत्ता छन्।
यसको आफ्नै खर्च मा मरम्मत, बहुमत एक लागत नयाँ कुरा खरीद तुलना मा, सम्बोधन गर्न प्रस्तावित। कारण शानदार ऐसे मर्मत सेवा गर्न उल्लेखनीय ग्यारेन्टी को लागत लागि क्षतिपूर्ति गर्न खोज्छ। र ग्राहकहरु स्टोर दायित्व ग्यारेन्टी - छैन यसको ब्याज, यो सजिलो उपभोक्ता यो टाउको दुखाइ "रचनाहरू" छ।
हामी के लिनुहुन्छ? यो सेवा केन्द्र सामना गर्न छैन सबै भन्दा राम्रो छ। भाँचिएको उपकरण ग्यारेन्टी हाम्रो दोष छैन - हामी पसलमा गएर हामीलाई पैसा फिर्ता गर्न माग। वा अर्को गुण उत्पादन द्वारा प्रतिस्थापित। विक्रेता इन्कार र सेवा गर्न हामीलाई पठाउँछ भने, आफ्नो माग अवैध हो। उपभोक्ताहरु 'अधिकार को संरक्षण मा Arming "व्यवस्था (कला। 18) र उजुरी लेख्न, विक्रेता आवश्यक दोस्रो प्रतिलिपि साइन इन गर्न। मना - पठाउन दर्ता मेल, एक बनाउन भूल छैन बाडों को सूची। तपाईं रसिद को स्वीकृति एउटा पत्र पठाउन आवश्यक छ। खरिद सामानहरूको लागि वारेन्टी दायित्व पनि समावेश विक्रेता को दायित्व विफलता लागि कारण पत्ता लगाउन एक स्वतन्त्र परीक्षा सञ्चालन गर्न दस दिन भित्र। त्यसपछि उहाँले या त पैसा तिर्न पर्छ वा इन्कार सफाइ। प्रतिक्रिया को एक ढिलाइ मा, साथै, हामी आफ्नो दण्ड (मा दिन माल को मूल्य को एक प्रतिशत) संग "बन्द आंसू" अधिकार छ, र यो प्रतिक्रिया को अभाव मा संघीय सेवा वा अदालत लागू गर्न सम्भव छ। तर पसलमा भन्दा अदालत गर्न कुरा ल्याउनु बिना पैसा रिटर्न।
विक्रेता जानाजानी खरीदार सबै दावा परीक्षा वस्तुको लागि लिइएको बिगार्न र अभाव गर्न ल्याउन सक्ने क्षमता छ। यो बच्नको लागि, यो एक विदेशी केन्द्रमा एक स्वतन्त्र परीक्षा बारी राम्रो छ। परीक्षा लागत गर्न खरीदार को विशुद्धता को मामला मा विक्रेता बाट कटौती गरिनेछ। तपाईं पनि एक अधिकृत सेवा केन्द्र (यो सेवा त्यहाँ कानुन अन्तर्गत प्रदान गर्न बाध्य छन्) द्वारा नि: शुल्क परीक्षण मा जिद्दी गर्न सक्नुहुन्छ।
जब समय पासपोर्ट प्रतिस्थापन गर्न आउँछ?
अदालत को निर्णय पछि सही कहाँ लिने? वाहन चलाउनु सही को Deprivation
Norma सफाई एक क्लीनर (कार्यालय र भंडारगृहों)
2013 मा UTII। मान "deflator गुणक"
तपाईं राहदानी परिवर्तन आवश्यक भएमा के गर्न
प्रमाणीकरण - कि के हो? उत्पादन प्रमाणीकरण के हो?
को कुल राजस्व के हो र कसरी गणना गर्ने?
Pancreatitis, यसको तरिका को निदान। लक्षण र रोगहरु को उपचार
स्प्र्याट्स 'कैट' माछा संग सलाद
"Tretyakovskaya" मेट्रो स्टेशन क्याफे, एक यात्रा लायक छ जो। फोटो र समीक्षा
आलु संग रूख पोर्क
कसरी उपयोगी जेली Izotov र कसरी खाना पकाउनु